Indawo yokuhlala e-Sun City Soho Hotel
Amakamelo nama-suites aphila kuze kube yizinto ezilindelekile ezidalwe yisimo esibucayi kanye nomoya ohlaba umxhwele we-Sun City Hotel.
Le Sun City Hotel eNingizimu Afrika inamakhemikhali angama-340, avulekile, ahlelekile futhi ayamema. Zonke amakamelo ehhotela ajwayelekile ehhotela elingu-4 eliseSun City Soho Hotel libheke echibini eliqhakazile futhi lihlonyelwe izakhiwo okulindeleke ukuba zivele endaweni yokuzijabulisa yamaholide ezwe lonke.
Ihhotela laseSun City Soho linendawo yokulala encane enobhekwe obukhulu benkosi, embhedeni wokulala, nendawo eningi yokuhamba kuyo. Indlu yokugezela en-suite inezindlu zokugeza zangasese ezitholakala kuwo wonke umuntu. Igumbi linombhede, ithelevishini yesikrini esiphezulu neziteshi ze-satellites, isimo se-air conditioning, izindawo zokwenza itiye kanye nokwenza ikhofi, ibha encane namahora angu-24 egumbini lokudlela.
Igumbi lababili elihle kakhulu
Amakamelo Okunethezeka alala abantu ababili emibhedeni emibili futhi abuye ahlambe futhi ahlanzeke ahlukene, ithelevishini yesikrini esithambile neziteshi zesathelayithi, izindawo zokwenza itiye kanye nokwenza ikhofi, i-minibar nezindawo zokudlela zamahora angama-24 e-ekamelweni lokudlela.
Wonke umndeni ungakujabulela ukunethezeka kweGumbi Lobuhle Lomndeni eSun City Soho Hotel - elinamibhede amabili, ububhede obukhulu benkosi, nombhede wezingane zokulala. Jabulela i-scenic lake kanye nokubukwa kwechibi lokubhukuda kusuka kubhaluni, futhi ihora lamahora angu-24 ekudleni endaweni lapho izingane zilambile.
Izivakashi ezimbili zingathola induduzo egumbini eliphezulu lokunethezeka eliphezulu elibhekene nombhede wamakhulu, noma imibhede, kanye nombhede, i-en-suite yokugezela enebhuku lokugeza nokugeza. Hlaziya endaweni yakho yokuphumula, emva kosuku lokuzijabulisa nokuzijabulisa ehhotela. Ezinye izinsiza zihlanganisa umoya-moya, indawo yetiyi kanye nekhofi, i-minibar namahora angu-24 ekamelweni lokudlela. Amakamelo ahamba phambili ayatholakala.
Igumbi Lokunethezeka / lomndeni
Jabulela amalungelo okuhamba emasimini ehhotela ukusuka ekamelweni lakho lokunethezeka elisendaweni yeGround Floor Superior. Igumbi lihlanganisa zonke izidingo ezidingekayo kubandakanya umbhede omkhulu wezintambo, umbhede wokulala wabantwana, i-en-suite yokugezela enezigaba ezihlukene zokugeza nokugeza, namahora angu-24 okudlela.
Igumbi elibizayol ilala nabantu ababili embhede okhululekile wenkosi. Khetha ukuthatha ibhathi elide, elishisayo endlini yokugezela en-suite noma eshaweni esisheshayo. I-suite nayo ihlanganisa indawo yokuphumula, ibhakhodi yangasese, kanye negumbi lesigumbi se-powder.
Ukuze uhlangabezane nokuhamba okunethezeka kokunethezeka ehhotela laseSoho eSan City Resort, ukhethe ukuhlala ku-Suite Presidential. Izivakashi ezimbili kuphela ezikwazi ukujabulela ukunethezeka okukhethekile koMongameli we-Presidential enikeza izivakashi zayo indawo yokudlela, i-balcony yangasese ne-sun loungers kanye ne-Jacuzzi ephelele emini noma kusihlwa.
Isidlo sasekuseni se-la carte siyatholakala
Ukufinyelela okukhokhayo ku-Valley of Waves